China High Quality Yakakwira Voltage Isolating Chinja Mugadziri uye Mutengesi | Nhoroondo
yakakwana mune zvakatemwa, yakakwira technical parameter yakakwira, yakafara nzvimbo. Yakawedzera, yakafara chiyero chekushandisa, inogona kushandiswa pakukwirira kwakakwirira. Kuisirwa nzira inochinja.
Kukwirira: 1000m ~ 3000m
Tembiricha yemamiriro ekunze: -30 kusvika 40 ℃ (-40 kusvika 40 ℃ munzvimbo dzinotonhora dzakakosha)
Mhepo inomhanya isingapfuuri 700pa (Yakaenzana ne34m / s)
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwete kudarika masere masere.
Ice kufukidza ukobvu hakuna kupfuura gumi mm
Kuisirwa nzvimbo hakufanirwe kuve nemoto unoputika uye unoputika zvinhu zvine ngozi, kemikari ngura uye chisimba vibration.
Post insulator kusvibisa nhanho: yakajairwa mhando iri 0 chikamu, anti-kusvibiswa i Ⅱlevel.
Paunoisa odha, ndapota ratidza pachena chigadzirwa modhi, yakatemwa voltage, yakagadzikana yazvino.
Ratidza iyo yekuisa nzira uye zvinodikanwa nezve pasi pasi switch.
Kana iwe uine chikumbiro chakakosha, ndapota ita kutaurirana nemugadziri.
Zvekugadzira Magadzirirwo GW4-40.5 GW4-72.5 GW4-126
Iyo yakatarwa ikozvino (A) 1250, 2000
Disconnector Rated yepamusoro inodzivirira yazvino (kA) 100
Rated pfupi-yenguva kutsungirira yazvino (RMS) kA 40
Rated pfupi pfupi redunhu nguva s 4
Ground chinja Rated yepamusoro inomira yazvino kA 100
Rated pfupi-yenguva simba frequency kumira nemhepo (RMS) kV panyika 95 160 230
munzvimbo yekuzvitsaura 118 200 230 + 70
Inoratidzirwa mheni yekumira inodzivirira voltage (yepamusoro) kV panyika 185 350 550
munzvimbo yekuzvitsaura 215 410 550 + zana
kubvumidzwa kushoma mu1 min simba frequency kumira nemagetsi kana pasi peji ichivhara kurarama chikamu che disconnector 53 94 164
switching kugona kwepasi kushandura inductance zvazvino remagetsi inductance zvazvino (azvino / voltage) 50 / 0.5 (Rudzi), 100/6 (B mhando)
Kunofambira mberi inductance zvazvino (azvino / voltage) 0.4 / 3 (Rudzi), 5/6 (B mhando)
nguva dzekuchinja 10 10 10
yakatemwa terminal static mechanic mutoro N urefu hwenzvimbo 1000 1000 1000, 1250
Chikamu chakatwasuka 750 750 750
Vertical simba 1000 1000 1000
switching capacitance yazvino A 2 2 2
switching inductance yazvino A 1 1 1
kuchinjisa busbar yekuchinjisa yazvino A (busbar yekufambisa voltage 100V) 400V, 2500A, zana nguva
Radio kupindira nhanho asingasviki 500 μV
Mechanical hupenyu 3000 3000 3000
imwechete pole uremu (kg) 240 300 350
chitsamba: Zvese zvinoshandiswa mukukwirira kwe2000m
Pashure: Yakakwira Hunhu Kukakavara Polymer Kumiswa Insulator
Zvadaro: Tsungirira yakaora Shed Booster yeiyo transformer chiteshi